"Aoka hofenoina ny Fanahy [ianareo], … dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an’ny Tompo, misaotra an’Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra, amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika." Efesiana 5:18-20
Vakio Lioka 17:11-19
Jesosy dia nifanena tamina lehilahy folo voan’aretina tsy azo sitranina tamin’izany fotoana izany, dia ny habokana. Natoka-monina izy ireo, ka nafoy tany. Hoy ny Lalàna : “Maloto izy, dia hitoetra mitokana, ka eny ivelan’ny toby no hitoerany” (Levitikosy 13. 46).
Nifanena tamin’ny Tompo izy ireo, ka avy teny lavitra teny no niantsoantso Azy hoe: “Ry Jesosy Tompo ô, mamindrà fo aminay”. Nohenoina avy hatrany ny vavaka nataony: tsy nandà azy ireo Jesosy. Nangoraka Izy, ka namaly azy noho ny fahoriany, tahaka ny ataony amin’ireo rehetra mitodika aminy am-pinoana. Nilazany izy ireo hiseho amin’ny mpisorona jiosy, mba hanamarinana ny fahasitranany. Nandeha izy ireo, ary sitrana teny an-dalana. Hafaliana re izany ! Ny iray taminy, izay vahiny, nony nahita fa sitrana, dia niverina nankany amin’i Jesosy “nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery”. Izy, izay tsy nahazo nanatona olona taloha, dia niankohoka teo an-tongotr’i Jesosy sy nisaotra Azy. Nanohina ny Tompo izany mari-pankasitrahana izany. Fa nankaiza kosa ireo boka sivy hafa sitrana? Tsy nisy niverina “hanome voninahitra an’Andriamanitra”. Sady gaga tamin’izany Jesosy no nalahelo.
Mba tian’ny Tompo ny handray fankasitrahana avy amin’ireo navotany. Miandry izany avy amin’ny tsirairay Izy, ary mitaona antsika ihany koa hanao fiderana miaraka. Fifaliana toy inona, rehefa afaka miara-manao izany am-pahatsorana, amin’ny fanahy sy ny fahamarinana, na dia vitsivitsy ihany aza, mba hahatsiaro ny Tompo Jesosy sy hanolotra Azy ny fitsaohana ! Tsy mendrika izany ve Izy?